बारेकोटका बाढी पीडितलाई जापानमा रहेका नेपालीहरुको सहयोग ! – Bignewskhabar.com
बारेकोटका बाढी पीडितलाई जापानमा रहेका नेपालीहरुको सहयोग !
बाढी पीडितहरुलाई छाकटार्न धौधौ !
लोकेन्द्र विश्वकर्मा । १३ आश्विन २०७७, मंगलवार १९:०९ मा प्रकाशित
जाजरकोट ,१३ असोज । जापानमा रहेका नेपालीहरुले रकम संकलन गरी बारेकोटका बाढी पीडितहरुलाई राहत बितरण गरिएको छ ।
हाल जापानमा रहेका बारेकोट ५ का नबराज थापाको जापानमा पहल र सहयोग ! यता समाजसेवी डम्बर विक्रम कार्कीको समन्वयमा बारेकोटका ४,५,६,७, वडाहरूका विस्थापित परिवारलाई जनही ,३० केजी चामल ! पहिरोबाट ज्यान गुमाएका ४ परिवारलाई जनही १० हजारका दरले सहायता गरेको समाज सेवी कार्कीले बताए ।
उनले भने विस्थापित भएका, जिरी सार्की टोल , भैलोखान , करुका , कर्किज्युला , धुमा, जिरि र सुवाकोट का विपन्न ९५ परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग ,गरिएको छ । भने पहि sexरोबाट आफन्त गुमाएका धुमाका कालीबहादुर चलाउने,र पूर्ण बहादुर चलाउने,सार्कीटोल जिरी सार्कीटोल का किसन सार्की र तुले सार्कीलाई आर्थिक सहयोग गरिएको थियो ।
यता बारेकोट गाउँ पालिका मा गत महिनाको भीषण बाढी पहिरो ले १२ सय घरपरिवार हरू विस्थापित भएका थिए । भने १२ जनाको मृत्यु र २ जना वेपत्ता भएका थिए । विस्थापित परिवारले छाकटार्न धौ धौ भएको बेला आर्थिक र खाद्यान्न सहयोग को जोहो गरिदिने सबैलाई पीडित परिवारले धन्यवाद समेत व्यक्त गरेका थिए ।